Tag: zoma mainty | Martech Zone
Tag: zoma mainty
Antontan'isa momba ny ecommerce: ny fiantraikan'ny areti-mandringana COVID-19 sy ny fanidiana amin'ny fivarotana antsinjarany sy an-tserasera
Sabotsy, Desambra 5, 2020 Sabotsy, Desambra 5, 2020 Douglas Karr
Ny fiantraikan'ny valanaretina pesta dia samy nahatonga ny mpandresy sy ho resy tamin'ity taona ity. Na dia voatery nanidy ny vavahady aza ireo mpivarotra enta-madinika dia natahotra ny mpanjifa ny COVID-19 na nasaina nandidy an-tserasera na nitsidika ny mpivarotra enta-mavesatra azy ireo. Ny areti-mandringana sy ny fameperana ataon'ny governemanta mifandraika amin'izany dia nanelingelina ny indostria iray manontolo ary azo inoana fa ho hitantsika ny vokadratsy mandritra ny taona maro. Nanafaingana ny fitondran-tena ny mpanjifa. Mpanjifa maro no tsy nino ary nanohy nisalasala
Paikady E-varotra Multichannel ho an'ny vanim-potoana fialantsasatra miova
Alarobia, Novambra 25, 2020 Alarobia, Novambra 25, 2020 Josh Wetzel
Ny hevitra ny Black Friday sy Cyber ​​Monday toy ny andro blitz iraika dia niova tamin'ity taona ity, satria ny mpivarotra lehibe dia nanao doka momba ny Black Friday sy Cyber ​​Monday ny fifanarahana nandritra ny volana novambra manontolo. Vokatr'izany dia nanjary tsy dia miresaka firy ny fifanarahana indray mandeha sy iray andro ho efa boaty efa feno olona, ​​ary bebe kokoa momba ny fananganana paikady maharitra sy fifandraisana amin'ny mpanjifa mandritra ny vanim-potoana fialantsasatra manontolo, mipoitra ny fotoana mety amin'ny ecommerce ao amin'ny ny fotoana mety
Playbook doka Facebook amin'ny zoma mainty & Q2019 4: Ahoana no hijanonana ho mahomby rehefa miakatra ny vidim-piainana
Talata, Novambra 19, 2019 Alahady 26 aprily 2020 Brian Bowman
Tonga eto amintsika ny fotoam-pivarotana fialantsasatra. Ho an'ny mpanao dokam-barotra, Q4 ary indrindra ny herinandro manodidina ny Black Friday dia tsy mitovy amin'ny fotoana hafa amin'ny taona. Matetika mitsangana 25% na mihoatra ny vidin'ny doka. Masiaka ny fifaninanana ho an'ny lisitra kalitao. Ireo mpanao dokambarotra ecommerce dia mitantana ny fotoana mampisondrotra azy ireo, raha toa kosa ny mpanao dokambarotra hafa - toy ny lalao sy fampiharana finday - manantena ny hanidy ny herintaona fotsiny. Farany Q4 no fotoana be atao indrindra amin'ny taona
Torohevitra 5 hanatsarana ny traikefanao momba ny fialantsasatra tamin'ny taona 2017
Alatsinainy, Novambra 13, 2017 Douglas Karr
Ireo mpiara-miasa aminay 250ok, sehatra fampisehoana mailaka, miaraka amin'ny Hubspot sy MailCharts dia nanome data sy fahasamihafana ilaina mandritra ny roa taona farany data ho an'ny Black Friday sy Cyber ​​Monday. Mba hanomezana anao ny torohevitra tsara indrindra, Joe Montgomery an'ny 250ok dia niara-niasa tamin'i Courtney Sembler, Profesora Inbox ao amin'ny HubSpot Academy, sy Carl Sednaoui, talen'ny Marketing sy mpiara-manorina ao amin'ny MailCharts. Ny angona mailaka tafiditra dia avy amin'ny fanadihadian'ny MailCharts an'ny 1000 voalohany
Manomboka ny Omnichannel amin'ny zoma mainty sy alatsinain'ny cyber
Talata, Novambra 7, 2017 Jessica Hawthorne-Castro
Tsy misy fanontaniana momba izany, ny fivarotana antsinjarany dia miova tanteraka. Ny fikororohana tsy tapaka eo amin'ireo fantsona rehetra dia manery ireo mpivarotra hangeja ny paikadiny amin'ny varotra sy ny varotra, indrindra rehefa manakaiky ny Black Friday sy Cyber ​​Monday. Ny varotra niomerika, izay misy ny Internet sy ny finday, dia mazava ho azy fa ny maizina amin'ny fivarotana antsinjarany. Cyber ​​Monday 2016 nitaky ny anaram-boninahitra ho an'ny andro fivarotana an-tserasera lehibe indrindra amin'ny tantaran'i Etazonia, miaraka amin'ny varotra an-tserasera 3.39 miliara. Tonga ny zoma mainty